Wax-u-Yahay - Is-beddelka farsamooyinka GIS - maalinta koowaad ee ESRI UCS - Jofumed
Wax-u-Yahay - Is-beddelka teknolojiyada GIS - maalinta koowaad ee ESRI UC
Luulyo, 2015 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Leisure / waxyi
2005 waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan ka soo qayb galo Shirka Istaraatiijiga ESRI, had iyo jeer meel isku mid ah: San Diego Convention Center, oo leh xayiraado waaweyn oo ka soo jeeda qariidadaha wadiiqada dheer ee quraaradda. Kuwo kayeelan waxay kooxuhu isku la gadhku dhegdheg iyo khamiisyo cadcad, tans qaaradda Afrika la qoslayay tizate hadhuudh iyo go'doon Hispanic rajeynaya in aan sawir kala firdhiso cusub si ay u muujiyaan off in Face ah.
Saddex waxyaabood oo aan xasuusto taariikhdaas, kaas oo ah 10 sannadkii hore:
1 Noloshu waa xiiso.
Marxalad kasta oo ka mid ah maalmahayaga waxay keenaysaa dadaal, qanacsanaan iyo barasho. Waxaan xusuustaa kuwa maalmood in aan shaqo ahaa 80 kiiloomitir u jirta guriga, wiilkayga farax booday oo wax fiiriyey for kubad markii aan dhegaystay yimaadaan habeenkii jimcaha, halka gabadhayda kaliya labo sano i aragtay indhaha weyn yaabeen oo ahaa nin in taas oo la waayay toddobaadka intiisa kale.
Sannadka kale wiilkaygu wuxuu tagaa jaamacada, gabadhuna maaha sharaxaad ka badan tan dhoola cadeyneysa si ay iiga digto cabsida aan weli nooleyn.
Tani waa nolosha xiisaha leh. Waxaan xasuustaa in sanadkaas aan markii ugu horeysay u tagay Shirka Istaraatiijiga ESRI. Waxay ahayd safarkeyga labaad ee Mareykanka iyo waxaan ku jirnay mashaqo cabsi ah mashruuc kaas oo aan ku lug lahaa. Waxaa naloo bixiyay laakiin ma aanan ogeyn bilkasta oo ay ahayd sababtoo ah waxay naga jareen seddex bilood illaa iyo bixiyaha kaararka deynta ayaa noogu liis gareynay liiska Xarunta Dhexe ee Risk. Sidaa daraadeed Isniintii Raúl waa inay i siiyaan 50 Busto si ay u iibsadaan qadada oo baska u raacaan Tegucigalpa si ay u raadsadaan kharashka safarka.
Galabta soo socota, waxaan cunay cuntooyinka badda leh ee la cuno ee ku yaala makhaayadda piquetero ee San Diego Embarcadero.
2 Raxmadduna waa dadka dhexdooda.
Inaad ku dhex jirto dadka 35,000, qolka qolka weyn ee muraayado waaweyn oo loo qaybiyey si ay u arkaan cabbirka la aqbali karo waxa si dhib yar u muuqata marxalad fog, waa dhiirrigelin. Laakiin maaha jawiga, laakiin dadka. Markaan eego Jack Dangermond waxa uu noloshiisa yahay, wuxuu iga dhigay inaan bedelo fikirkayga ku saabsan shuruudaha qowmiyadeed ee u dhexeeya hal calaamad iyo mid kale, inta u dhaxaysa macaamiisha iyo ilaha furan ee sanadahaas aan la arki karin.
Waxaan is afgaranwaa karaa waxyaabo badan oo, laakiin waa inaynaan iloobin in shirkadaha of size this suuqa dhisay hadda ku nool code lacag la'aan ah sanduuqa xidhan. Tijaabi in ay ahaayeen kuwa uu hogaaminayo ay gurus tacsida qaaska ah, kakanaanta aan shaybaarka Geodesy waxaan qoom aan garanayn, dadka u raaxaysan xamaasad gacmihiisa, dhex quudhsiga aqoonta dambeeya iyo hirgelin lahaa albaabada furo kuwaas oo ka soo jeeda jawiga juqraafi.
Waxa uu ahaa sidaas u Waxyoon si aad u aragto raso in cheles la Kenenisa tousled, sida wejigooda u taagay ka Ingiriisi ee Kaabayaasha London Waa fikrad, sida wareegyada mugdi soo bandhigay Free Maalmo gvSIG. Xiisado badan oo ku soo noqnoqonaya, laakiin koontaroolay illaa heerkulka waxyaabihii ay qabteen, inta u dhexeysa isku dheelitirka dhismaha iyo ficil ahaaneed ee u muuqda in ay ka mid yihiin qoraallada dabeecada ah ee ay iyagu naftooda sheegi waayaan.
Si aan u xasuusto waqtigaan ayaa igu siinaya qarqaryo, si aan u aragno xiisaha iyo filitaanka xirfadaha cusub. Waxay dhamaantood isku mid yihiin, oo ay dhiirigelisay labada Abaalmarinta Sanadkaas, iyo Europa Challenge in gvSIG ay hadda ku guuleysato. Regio!
Waxaan mar kale ku arkay hal maalin oo isku mid ah, marka Hugo Chavez uu yimid dalkeyga si aan caytamo ganacsatada ee madaxweynaha. Noloshu waxay iga dhigtay inaan joojiyo rumaysadka ku dhowaad dhammaan waxyaalihii uu ku sheegay, ma aha fikrado laakiin waxay ku nooshahay khibrad. Laakiin taga waxaan la yaabay sida u waxyoonay, wuxuu ahaa ee uu fikrad, waxba u qaban la kartuunada ee kacaan aan dalka kuwaas oo lagu xirto u saftay style cagaaran xiran funaanado Fidel Castro iyo Che Guevara. Galabtani waxa ay ahayd cashar aan loo tixgelineynin xaqqa ba'an iyo kursi iloobi ah oo ku saabsan kuwa ku fikiray inay ku jireen bidixda.
Naxariistu waa dadka.
3 Qarsoodigu waa inuu ogaadaa meesha ay socdaan.
Laakiin haddii ay jirto wax aad ka baraneyso inaad ku jirto dhacdo sida Shirka Istaraatiijiyooyinka ESRI, waa fahamka meesha ay socdaan. At shirarka, kuwaas oo aadan u socday si ay u bartaan trick cusub, oo aan xitaa ku celi mar dhaqaaq tartiib ah, su'aal, inta badan ka yar haddii aynu nahay macnaha Hispanic waxaan doonaynaa in la fahmo fariinta waqti lumin in turjumaad ah by wadnaha. Waxaa la fahamsan yahay hal mar waxa waxa dhici doona labada sanno ee soo socda, ma aha oo keliya software-ka noo doorbidayaan, laakiin qaab aan ku noqon karin suuqa adduunka.
Markaad dib ugu noqoto dhul u gaar ah, waxaa suurtogal ah in aad ku raaxaysato isku mid ah qaabka ugu yar; dhexeeya kaftanka nacaybka Raul, dhadhanka qalaad Rock yiddidiilo Chamaco, xirfadaha Carnivorous Jorge, indhaha quruxsan ee Melissa, bitches wanaagsan Manuel, beddelo moon Wilson, meel sigaar cabbin Barcenas. Dunidaas oo ay adagtahay in ay noqoto mid halis ah oo aan waligeed qoslin. Halka, iyada oo aan la ogaanin, dareenka caanka ah ayaa noo horseeya in aan diyaarino habka isdhaafka aan u aragnay; Waxaa cad in ay ogaadaan in halkan in America ka dhacaan shan sano, kuwaas oo loo arki karaa in Spain saddex, oo sida muuqata ee Munich marnaba halkan dhici karto.
Laakiin taasi waa meesha ay di'i ka cabbin, waxaad ka daydo UML tallaabooyinka aasaasiga ah xiddigaha u soo degay inuu qaato dawladaha degmada. Kuwa aan u horseedi karaa GIS halka qabanayaan CAD wanaagsan, kaasoo ay u daryeelaan 3D yar GML haddii aasaaska yihiin Qiyaanada Canshuur dagaalka ka baxsan oo aan la si lahu musuqmaasuqa gudahood; waxaa halkaas waxaad arki yar xiiso WFS-T sida uu cabsi waa in Maxkamadda Sare ee hantidhawrka kor u war qoraal ah oo ka mid ah mas'uuliyadda ku guuldareysteen inay fuliyaan heshiisyadii la qiimeeyo qiimaha shanta sano ee la soo dhaafay.
Sidaas awgeed waxaa lagu qiyaasay, Shirka Istaraatiijiga ESRI ma aha in uu keeno walaac la xidhiidha fanaaniinta caanka ah, ama aan looga digin Taliban oo ka mid ah codeeynta bilaashka ah. Waa dhacdo la doonayo in lagu dhiirrigeliyo maskax furan, si loo arko meesha ay socoto, qeyb ka mid ah ayaa laga soo koobay fikradaha bilaashka ah ee software, sida qeybta kale ee kooxdani ku dhasho.
Iyo sida ay muujinayso, waxaan ka tagayaa fiidiyowyadii 5 ee ugu fiicnaa ee aan ka helnay San Diego maanta.
GIS ee dunida oo dhan. Qaybta 1
Astaanta Wajiga Sawirka
Xogta Weyn & GeoAnalytics
Fiiri Fiidiyowyo badan
Post Previous«Previous dhiirigelin qaali ah oo gvSIG - Challenge Award Yurub
Post Next 20 Tallaabooyin aad ku dhisi karto magaalo ka soo xoqidNext »